Tag: denye aha
Ịgụ Oge: <1 nkeji BrightTag, igwe ahia igwe ojii maka ndị na-ere ahịa n’ Internetntanet, azụrụ Ama. Ihe ịrịba ama bụ ebe a na-ere ahịa maka ahịa ọwa ahịa site na email, SMS na mgbasa ozi mmekọrịta. Ihe nrịba ama gụnyere: Akwụkwọ akụkọ Email - emeela nke ọma, ndebiri email kachasị iji rụọ ọrụ ma ọ bụ mepụta nke gị. Izi ozi ederede - bido mmemme dị irè ma kwenye na ihe ndị na-ebu ekwentị. Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze - bipụta ọkwa gị na Facebook na Twitter, na-eji obere URL iji soro ọdịnaya gị.
Ịgụ Oge: <1 nkeji Ọnwa ole na ole ọ bụla, achọrọ m ịgafe ozi ịntanetị m ma bido wepụchaa ihe niile. Site na nyiwe nwalere m, na ọkwa mmekọrịta na akwụkwọ akụkọ - igbe m juru n'ọnụ. Ana m eji ụfọdụ ezigbo ngwaọrụ iji nyere aka jikwaa ya, dị ka Mailstrom, mana ọ ka bụ ntakịrị njikwa. Unroll.me dị ebe a iji nyere gị aka ịmaliteghachi ịchịkwa igbe mbata gị. Kama ịnata ọtụtụ ozi ịntanetị ndenye aha ụbọchị niile, ịnwere ike ịnata naanị otu.
Ịgụ Oge: 2 nkeji Izu a, achọrọ m iso ndị otu egwuregwu nọ na Sproutbox, ihe ịtụnanya teknụzụ dị na Bloomington, Indiana. Ọ bụ ụfọdụ ndị mmepe ọkachamara bidoro Sproutbox bụ ndị kpebiri ihe ha hụrụ n’anya na ihe ha masịrị ya na-ewere echiche wee weta ya n’ahịa dị ka ihe ngwọta. Ha na-eme nke ahụ maka ịha nhatanha na ọrụ ha kpebiri ịga ahịa. Agara m taa dika onye ikpe-azu ha ọzọ Sprout… the
Ịgụ Oge: 3 nkeji Na ndị email gị ndị debanyere aha na ịpị site na ebe nrụọrụ weebụ gị, ịtụ ngwaahịa gị, ma ọ bụ ịdenye aha maka ihe omume gị, dị ka atụ anya ya? Mba? Kama ha na-anabataghị, na-edebanye aha ma ọ bụ na-eme mkpesa? Ya bụrụ otú ahụ, ikekwe ị naghị eme ka ihe ndị ị na-atụ anya ha mee.